" ဦးဝင်းကြူက သမီးဆန္ဒအတိုင်း အမျှ မဝေသေးဘူးတဲ့ "
Set as favorite Bookmark Email this Hits: 12322
written by jasmine, December 03, 2009
I feel really ,really sad,,,,,but I really proud of you !!!! " May you rest in peace"" . I hate this people....
+0 မြန်မာပြည်သူ တွေအတွက် ဒီဓါတ်ပုံဟာ အားမာန်ေ တွပြန်ပြည့်ဝ စေတယ်။
written byုkomyolay, October 24, 2009
မြန်မာေ ကျာင်းသားတွေရဲ့ ရဲရင့်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို အလေးပြုပါတယ်။
လူသတ် ရာဇ၀တ်ကောင်တွေကို တစ်ချိန်ကျရင် အရေးယူနိုင်မှာပါ။
ဒီဓါတ်ပုံဟာ မြန်မာပြ ည်သူတွေရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ အမြဲတမ်း နေရာ ယူထားမှာပါ။
တရားမျှတတဲ့၊ ယဉ်ကျေးမြှု မင့်မားတဲ့ ၊ ခေတ်သစ်မြ န်မာနိုင်ငံတော်မှာ
မ၀င်းမော်ဦး နဲ့အတူ ပေးဆပ်ခဲ့ကြသူတွေကို မြင့်မြင့် မားမား ဂုဏ်ပြုကြမှာပါ။
စစ်အာဏာရှင် စနစ် ကျဆုံးပါစေ။
ပြည်သူ့အ ရေးတော်ပုံ အောင်မြင်ပါစေ။
+1 ၀မ်းနည်း နာကျည်းမိ ပါတယ်..
written by moemoe(TAIWAN), October 11, 2009
မဝင်းမော်ဦး. သမီး.. တာဝန် ကျေခဲ့ပါတယ်။ စစ်အစိုးရ အမြန်ဆုံး ကျဆုံးပါစေ။ ဗမာပြည် ဒီမိုကရေစီ အမြန်ဆုံး ရ
written by မားဆိုး, October 08, 2009
ကျနော် ဒီဓါတ်ပုံကို လူမှန်း သိတတ်စ ကတည်းက မြင်ဖူးခဲ့တာပါ။
ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါတိုင်းလည်း ကြက်သီးထအောင် ခံစားရပါတယ်။
ကျနော့်မှာသာ အခွင့်ရှိရင် ဒီဓါတ်ပုံလေးကို ပူလစ်ဇာဆု ပေးချင်ပါတယ်ဗျာ။
အမချစ်တဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ တာဝန်ကို ကျနော်တို့ မောင်ငယ်တွေ ဆက်လက် သယ်ဆောင်သွားပါ့မယ်ဗျာ။
+3 လေးစား ဦးညွတ် ဂုဏ်ပြု လိုက်ပါတယ်
written by ဈန်တည်ရာ, October 05, 2009
အမဖြစ်စေချင် မြင်စေချင်တဲ့ တိုင်းပြည်မျိုး ဖြစ်အောင် ကျနော်တို့တွေ အာဏာရှင် စစ်အစိုးရကို
ဆက်လက် တော်လှန်နေပါ့မယ်လို့ သစ္စာ အဓိဌာန် ဆိုပါတယ်.....
+3 I am totally sorry.
written by moemoe, October 04, 2009
Congratulations!! to Ma Win Maw Oo..I Live in Taiwan.I come from myanmar.
+1 Proud for U!!!
written by Zaw, October 03, 2009
I really sad when I read that story .. Never forget, never forgive!!!!
+0 ချစ်ခင်စိတ်ထား.. ..လေးစားသမှု... တို့ဂုဏ်ပြု
written by မျိုးချစ်, October 02, 2009
ချစ်ခင်စိတ်ထား... .လေးစားသမှု. ..တို့ဂုဏ်ပြု။
+1 ဗမာပြည်သူ/သား များရဲ့ မျက်ရည်
ပြည်သူအများစု မျက်ရည် ကျခဲ့ရပါတယ်
အဲ့ဒါကို ဘယ်သူနဲ့ အစားထိုးမလဲ....
အစ်မတို့တွေ၊ အစ်ကိုတို့တွေရဲ့ အသက်ပေါင်း များစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။
ရလဒ်တာတော့ နတ္ထိ။ ရည်မှန်းချက်ြ ပည့်အောင် ဆက်လက် တိုက်ပွဲ ဝင်နေကြအုံးမှာပါ။
written by လူမုန်း, October 02, 2009
သင့်အား ငါ ဦးညွတ်ပါသည်။ သင်၏ သတ္တိ နှင့် စွန့်လွှတ်မှု တို့သည် ငါ့အားလည်း ဖြစ်ပါစေသတည်း။
written by May, September 26, 2009
I am very proud of you...ma win maw oo.
I don't know how to metion my sorrow for you.
I am totally sorry.
Thank you ... Irrawaddy.you give usachance to read this true news.
written by dartukalyar, September 23, 2009
အခုမှပဲ ဒီဓါတ်ပုံအကြောင်းကို သိတော့တယ်။ ဖတ်ပြီး စိတ် မကောင်းဘူးဗျာ...။ အ၇မ်းကို လေးစားပါတယ်. မဝင်းမော်ဦး... ကျွန်မက ၈၆ မှ မွေးတာပါ.. .အစ်မက အသက် ၁၆ နှစ်နဲ့ မမျှအောင် ခံယူချက်ပြင်းထန်တာ ကျွန်မ တကယ်ကို လေးစားမိတာပါ... တစ်နေ့ နေ့ တစ်ချိန်ချိန် ကျရင်... အစ်မတို့ အစ်ကိုတို့ အသက် စွန့်ခဲ့ရတာ လုံးဝကို အလဟဿ မဖြစ်စေရပါဘူး ... အစ်မနာမည်ခေါ်ပြီး အမျှ ဝေရမယ့်ရက် ရောက်တော့မှာပါ အစ်မရယ်. .............
+6 Congratulations to Ma Win Maw Oo
written by Phyu, September 23, 2009
I appreciate what you had done to our people, Ma Win Maw Oo.
I was4at that time so I don't know much about that massacre.
But when I grew up and heard about the true story of the victims of that 88 massacre, I feel very sad.
I also feel ashamed on myself and I can't bear to those who are careless about it.
If we are still careless about the issue, how do we answer for the people who fought bravely even they are younger than us?
Again, Thank you very much Ma Win Maw Oo.
Thanks for the people who collect and narrate this information until now.
+3 thank u to irrawaddy for this article
written by bohtike, September 23, 2009
ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ပြီး ကျွန်တော် မျက်ရည် ကျမိပါတယ်။
ဆရာဝန် နှစ်ယောက်ကိုလည်း လေးစားပါတယ်။
၁၆နှစ် သမီး တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုလည်း အံသြမိတယ်။
စစ်အစိုးရ အမြန်ဆုံး ကျဆုံးပါစေ။
+4 ဖတ်ရင်းနဲ့ ငိုမိတယ်ဗျာ
written by ကိုဇော်, September 23, 2009
အမ ကို အမျှ ဝေနိုင်ဖို့ အချိန် မဝေးတော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အမ ကိုင်ထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ရဲ့ သမီး ကျွန်တော်တို့ အမေ ရယူ ပေးနိုင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရမှဘဲ အမျှ ဝေပါရစေ အမရယ်။
ဆရာဝန် ၂ဦးရဲ့ အမည်ကို သိရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ မြင့်မြတ်ပါတယ် ဆရာတို့ရယ်။။။
+7 မ၀င်းမော်ဦး သတင်း
written by ko Phone, September 23, 2009
အခုမှပဲ ဒီဓါတ်ပုံအကြောင်းကို သိတော့တယ်။ သိပ်ကို ကေင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေး ပါဘဲ။ မ၀င်းမော်ဦးနဲ့ သူ့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေလိုချင်တဲ့ နေ့ရက်တွေ အမြန် ရောက်နိုင်ပါစေ။
written by အလင်းရောင်, September 23, 2009
အရမ်းကိုလေးစားပါတယ် တိုင်ပြည်နဲ လူမျိးတွေအတွက် လိုအပ်နေတဲဆန္ဒတွေကို အမြန်ဆုံးပြည့်စုံအောင် တိုက်ပွဲဝင် သွားမယ် ။
written by Aung Aung, September 23, 2009
မ၀င်းမော်ဦးလို သူရခြေါင်းများ ထပ်မံ ပေါ်ထွက်နိုင်ပါစေ။ Nဆိုတဲ့ ဆရာဝန် တစ်ဦး ရေးသလို နအဖ ဟာ ယူနီဖေါင်းဝတ် အကြမ်းဖက် သမားတွေပါ။ သူတို့ ထိုင်ခုံ လှုပ်ရင် သတ်မှာပဲ
+4 မထင်ရှားခဲ့သော အာဇာနည်များ
written by အိမ်, September 22, 2009
ဖတ်ပြီး စိတ် မကောင်းဘူးဗျာ...။ ဒီလို စိတ်ဓာတ် ရှိခဲ့တာလဲ အံ့သြ ချီးကျူးလို့ မဆုံးပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ပုံမြေကျမှာ စိုးလို့ အသက် ပေးသွားတဲ့ မဝင်းမော်ဦး ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကတော့ တကယ်ကို ရှာမှ ရှားတဲ့ စိတ်ဓာတ်ပါပဲ ဗျာ...။ ငယ်ရွယ်တုန်း အချိန်မို့ စဉ်းစား ဆင်ခြင်ဥဏ် မရှိလို့ မိုက်တယ်ပဲ ပြောပြော ဒီလို လူစားမျိုးက ရှားမှရှားပါ။ သူမ၏ မိဘများ အတွက်လဲ ဝမ်းနည်း နှမျောမိပါတယ်၊ ဂုဏ်လဲ ယူမိပါတယ်ဗျာ။
written by chitsu, September 22, 2009
မမ တာဝန် ကျေပါပေတယ်၊သမီးက အဲဒီ အချိန်တုန်းက မှ လူ့ပြည် ရောက်တာစိုတော့ ဒါတွေကို မသိခဲ့ရပါဘူး၊ အရမ်း ၀မ်းနဲမိတယ်၊ အရမ်းလဲလေးစားမိပါတယ်မမရယ်၊ အချိန် မတန်သေးလို အမျှ မဝေချင်သေးပါဘူး ၊နောင်တချိန် မမ မြင်ချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်ကြီး မြင်ရတဲ့ တနေ့ကျရင် မမ ဖြစ်ချင်တဲ့ အမျှ ဝေဖြစ်အောင်ဝေ ပါ့မယ်လို ချစ်စု ဆုတောင်း ပေးမယ်နော်၊ မမ ရောက်ရာ အရပ်ကနေ စောင့်မျှော် ကြည့်မြင်နိုင်ပါစေ မမ ရယ်၊
+4 အမျှ ဝေသင့်ပါတယ်။, Low-rated comment [Show]
written by mie , September 22, 2009
i m sorry.. i really do
written by myokowin, September 22, 2009
When I read this article ,I can.t effort to keep my tear for his brave.
+1 အမ အတွက် အမြန်ဆုံး အမျှဝေ ပေးနိုင်ဖို့ြ ကိုးစားပါ့မယ်
written by moesatni, September 22, 2009
ဒီပုံကို မြင်ဖူးတာ ကြာပါပြီ .... အခုမှ အကြောင်းစုံ သိရတာပါ။ (888 တုန်းက ကျွန်တော်က (၅)နှစ်သားပဲ ရှိသေးတယ်။ မ၀င်းမော်ဦးတို့ တာဝန် ကျေခဲ့သလို ကျွန်တော်တို့လည်း တာဝန် ကျေနိုင်အောင် ကြိုးစား နေပါတယ်။ အာဏာရှင်ရဲ့ သေနတ် ပြောင်းဝက ကျည်ဆန်တွေ ကုန်ရင်သာ ကုန်သွားမယ်။ တရားမျှတမှု အတွက် တိုက်ပွဲ ၀င်နေမယ့် မျိုးဆက်က ဘယ်တော့မှ ကုန်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
+25 Congratulations!! to Ma Win Maw Oo
written by Ahmad, September 22, 2009
Really makes me feel and REALLY SAD for Ma Win Maw Oo .....We're going to TRY to get what all we want..... Thanks so much Irrawaddy..
written by shwe, September 22, 2009
May her parents and family able to call her name to offer the merit of good deeds to her as soon as possible
+2 One of the doctors' name is incorrect
written by N, September 21, 2009
I would like to make some correction; I know both doctors in the photos.Ko Saw Lwin (the one at the front) is two year senior to me and Win Zaw (the one at the back) is my class mate. Both doctors studied medicine in IM (1), Rangoon. Win Zaw isavery nice guy, simple and honest. He is still alive in Burma. Still working asaGP in Irrawaddy Delta. I do not know much about Ko Saw Lwin. Definitely, the one at the back is not Ko Min Thein; I don't know him as well. You can ask anyone from our Batch (1982- 1990, IM (1) graduates) they can tell that the one at the back is Ko Win Zaw. It has been 21 years but memories are still very fresh. We all are in Final Part II when 8888 democracy revolution happened. That changes our way of thinking, aims and ambitions. Some got into politics and gave up medicine some went to Thailand ,some continue the study and becomeadoctor. Whatashame! So many ways of sacrifices but after 21 years, now we are in early 40s, Burma has not changed! We needaleader like Mikhail Gorbachev from USSR or (FW) de Klerk from South Africa.
I cannot see anyone like them in the present military regime. They are not soldiers they are just uniformed terrorist killing and torturing own people.
written by ကျော်စွာ, September 21, 2009
ဒီဆောင်းပါးအတွက် ကျေးဇူး အရမ်း တင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
+2 verry feel sad
written by moe, September 21, 2009
I hear and I read when like this news I always feel sad
+3 လေးစားပါတယ်.. မဝင်းမော်ဦး
written by မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားတစ်ဦး, September 21, 2009
လေးစားပါတယ်ဗျာ...ကျွန်တော်တို့က ၈၆ မှ မွေးတာပါ..ဒါပေမယ့် အစ်မရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ကြည့်ရတာ ကိုယ့်ညီမလေး တစ်ယောက်လို ခံစားရ ပါတယ်.. အစ်မကို သယ်လာပေးတဲ့ ဆရာဝန် နှစ်ယောက်ကိုလည်း အရမ်းလည်း လေးစားပါတယ်.. .အစ်မက အသက် ၁၆ နှစ်နဲ့ မမျှအောင် ခံယူချက်ပြင်းထန်တာ ကျွန်တော် အမှန် တကယ်ကို ကြက်သီး ထမိတာပါ... တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန် ကျရင်... အစ်မတို့ အစ်ကိုတို့ အသက် စွန့်ခဲ့ရတာ.. အလကား မဖြစ်စေရ ပါဘူး...လုံးဝကို အလဟဿ မဖြစ်စေရပါဘူး ...စစ်တပ်ကို အဲသလောက် အထိ ရက်စက်လိမ့်မယ် လို့ လည်း မထင်ခဲ့မိပါဘူး... ၂၀၀၇ ကျမှ မျက်ဝါး ထင်ထင် တွေ့မိမှ တကယ်ကို နာကျည်းမိ ပါတယ်... လမ်းပေါ်မှာ ကြွေလွင့်ခဲ့ရတဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေကို ကိုယ်ချင်းစာ စိတ်၊ သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်း စာစိတ်တွေနဲ့ အလေး ပြုနေမိပါတယ်...
Posted by Aung Myint Htun at 9:50 PM